ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: December 2011
“ယမုံနာငါး ဂင်္ဂါငါး အစာဟပ် ပြိုင်ကြရာဝယ်”
(၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းက ရေးတင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပို့စ်အဟောင်းလေးကို စာအသစ်မရေးနိုင်ခင်စပ်ကြား ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။)
“လူက တိရိစ္ဆာန်ထက် သာလွန်တယ်ဆိုပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ သာလွန်တာမဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့… ဘယ်ကောင် ငါးနဲ့ရေကူးပြိုင်ရဲသလဲ”
အောက်က နားထောင်နေသော ပရိသတ် ဝေါကနဲ ပွဲကျသွားသည်။ စာပေဟောပြောပွဲတခုတွင် စာရေးဆရာတယောက် ဟောပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
“မင်းတို့ သမင်လောက်လည်း အပြေးမသန်နိုင်ဘူး။ ဆင်လောက်လည်း ခွန်အားမကြီးနိုင်ဘူး။ လူဆိုတာ ရယကနဲ့၊ မယကနဲ့၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးနေကြတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း….. ဟေ့၊ လေမထွားနဲ့၊ ပျားကို မမီဘူးကွ”
“အေး…. ဒါပေမယ့် အဲဒီ ခွန်အားကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ကို လူက ခိုင်းစားလိုက်တာပဲ။ ရေကူးသန်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ငါးကိုလည်း မျှားစားပစ်လိုက်တာပဲ။ ညီညွတ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ပျားဆိုလည်း ဖွပ်ပြီး စားပစ်လိုက်တာပဲ။”
“လူက တိရိစ္ဆာန်ထက် သာလွန်တဲ့အချက်တွေထဲမှာ နံပါတ်တစ်… ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်ကြီးခြင်း၊ နံပါတ်နှစ်…. ကိုယ်ကျင့်တရားရှိခြင်း၊ နံပါတ်သုံး…. အနုပညာ၌ ခံစားတတ်ခြင်း……..”
ဆယ်စုနှစ်တွေ ချီပြီး ကြာခဲ့ပြီ။ ဆရာအောင်သင်းပြောခဲ့တဲ့ စကားသံတွေက ကျနော့်နားထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်ဆဲ။
မှန်လိုက်လေဆရာရယ်…လို့ စိတ်ထဲမှာလည်း တသသ ရေရွတ်မိပါတယ်။ ဟောဒီလောကကြီးမှာ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်(ဆင်ခြင်တုံတရား)ပျောက်ကွယ်သွားလို့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့မခြား ဖြစ်သွားရသူတွေ၊ ကိုယ့်ကျင့်တရား ပျောက်ဆုံးသွားလို့ တိရိစ္ဆာန်ပမာ ဖြစ်သွားရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး မဟုတ်ပါလား။
ဆရာပြောခဲ့တဲ့ ဥပမာထဲက ငါးမျှားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးကိုပဲ ကျနော့်ဘာသာ တဆင့်တက်ပြီး အတွေးနယ်ချဲ့မိပါတယ်။
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်ပမာဏ အဆမတန် ကွာခြားနေတယ်။ လူတွေက ငါးတွေ ကြိုက်တတ်တဲ့ တီကောင်တို့ ပိုးကောင်တို့ကို ငါးမျှားချိတ်အဖျားမှာ အသာချိတ်ပြီး ငါးတွေကြားထဲ ပစ်ချပြီး မြှူဆွယ်တယ်။ ရေထဲက ခမြာများကတော့ လူတွေရဲ့ ပရိယာယ်ကို ဘယ်သိရှာပါ့မလဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးတွေ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရတော့ ဝမ်းသာအားရ ဟပ်ပြီပေါ့။ အဲဒီမှာတင် ငါးမျှားချိတ်မှာတန်းလန်း တဖျတ်ဖျတ်လူးပြီး ပါသွားတော့တာပဲ။
ဒါပေမယ့် ငါးတွေပဲ ဒီလိုခံရတာလား။ မဟုတ်ရေးချမဟုတ်။ လူတွေမှာလည်း လူသားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ပါလျက် သတိမမူမိတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ စိတ်တွေက ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အခါ ငါးနဲ့မခြားတော့ဘဲ အစာကိုသာ မြင်တတ်ကြတော့တယ်။ နောက်က ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်တော့ဘဲ လောဘတကြီး ဟပ်လိုက်မိလို့ ငါးမျှားချိတ်မှာ တန်းလန်းပါသွားတဲ့ လူတွေလည်း ဟောဒီလောကကြီးမှာ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် “ငါးစာကိုသာမြင်တယ်၊ ချိတ်ကိုတော့ မမြင်ဘူး” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား ပေါ်လာတာပေါ့။ ဒါက ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ် ကွယ်ပျောက်သွားလို့ လူစင်စစ်က တိရိစ္ဆာန်နဲ့မခြား ဖြစ်သွားရတဲ့ ဥပမာ တခုကို ပေးတာပါ။
အလားတူပဲ။ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျောက်ဆုံးသွားလို့ တိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ ပြုမူတတ်သူတွေကိုလည်း ဒီလောကကြီးမှာ မမြင်ချင်အဆုံး မဟုတ်ပါလား။ ဆရာအောင်သင်းကတော့ ပြောတယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားတို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တို့ဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့။ ခြင်္သေ့တကောင်အဖို့ အစာစားကာနီးမှာ “ဒီသမင်မဟာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သားငယ်လေးတွေနဲ့လား။ ငါစားလို့ မဖြစ်ပါဘူးလေ” ဆိုတာမျိုး မတွေးဘူးတဲ့။ စားလိုက်တာပဲတဲ့။ ဒါပေမယ့် လူ့လောကမှာလည်း အဲဒီလို တိရစ္ဆာန်သာသာ လူစားမျိုးတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေတယ်။ ကျောင်းသားမှန်းမသိ၊ သံဃာမှန်းမသိ၊ အမျိုးသမီးမှန်းမသိ၊ ပြည်သူမှန်းမသိ….. ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရောဆိုပြီး မတရားသတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက် နေသူတွေ ရှိတယ်။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးကို နအဖ စစ်အစိုးရက ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းပုံကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိတော့တယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျောက်ဆုံးသွားလို့ လူစင်စစ်က တိရိစ္ဆာန်နဲ့မခြား ဖြစ်သွားရတဲ့ ဥပမာ တခုကို ပေးတာပါ။
အဲဒီလို ကိုယ့်ကျင့်တရားပျောက်ဆုံးသူတွေနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးသူတွေ အချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ငါးမျှားပွဲတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်ခင်ဗျ။
ကိုယ်ကျင့်တရားပျောက်ဆုံးသူတွေက မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် ငါးစာကို ဗန်းပြပြီး ကျိုးကြေင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးသူတွေကို မျှားတတ်တယ်ခင်ဗျ။ မျှားတဲ့လူကမျှား… ဟပ်တဲ့လူက ဟပ်။ မြင်ရတာ အတော်စိတ်မချမ်းသာစရာ၊ စက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းပေါ့။
အခုလည်း ကိုယ်ကျင့်တရားပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နအဖ စစ်အစိုးရက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကဆိုတဲ့ ရေအိုင်ကြီးထဲကို “အရပ်သားအစိုးရ”၊ “ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ” ဆိုတဲ့ ငါးစာကလေးတွေကို ပစ်ချလိုက်ပြီ။ ဒီအတိုင်း ရက်ရက်ရောရော လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ပစ်ချလိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ငါးမျှားသူတို့ ထုံးစံအတိုင်း ငါးမျှားချိတ်မှာ တပ်ပြီးမှ ပစ်ချလိုက်တာ။ သူတို့ရဲ့ ငါးမျှားချိတ်ကတော့ တခြားဟုတ်ရိုးလား။ “တတိုင်းပြည်လုံးကို ထာဝရ စစ်ကျွန်ပြုရေး” ဆိုတဲ့ (၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မှာ မတရားအတည်ပြုခဲ့တဲ့ ညောင်နှစ်ပင်ဖွဲ့စည်းပုံ) ထက်သန်မြမြ ကြောက်မက်ဖွယ် ဧရာမ ငါးမျှားချိတ်ကြီးပေါ့။
အဲ…. နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က တချို့ငါးတွေကလည်း အစာကိုမြင်တာနဲ့ ဟပ်ချင်ဇောနဲ့ ထွန့်ထွန့်လူးနေပြီ။ ပုထုဇဉ် လူသားတွေရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်မှာ သာမန်အားဖြင့် အောက်ခြေမှာ ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ လောဘစိတ်ကလေးတွေဟာ သူတို့ ကြိုက်တတ်တဲ့ ငါးစာကို မြင်ရတဲ့အချိန်မှာ လောဘနဲ့ မောဟအဖြစ် ပလုံစီပြီး အပေါ်ကို တိုးထွက်လာတယ်။ အဲဒီ မောဟပလုံစီကလေးတွေကပဲ လူတွေရဲ့ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်မျက်စိကို ပိတ်ဖုံးသွားပြီး ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်အောင် လှည့်စားပစ်လိုက်တယ်။ အခုဆိုရင် တချို့ငါးကလေးတွေဟာ နအဖ ပစ်ချထားတဲ့ အစာကို ဟပ်ချင်လွန်းလို့ ဣနြေ္ဒမရ တဖျပ်ဖျပ်လူးနေရှာပြီ။ ခပ်ဝေးဝေးက ငါးတွေကလည်း သူတို့အနားကို အစာပစ်ချလာဖို့အရေး “ဗွမ်းကနဲ” “ဗွမ်းကနဲ” ပွက်ပြီး အသံပေးနေရရှာတယ်။ တချို့လည်း ရေမျက်နှာပြင်ထက်ကို ခုန်တက်ပြီး ကိုယ်ယောင်ပြရရှာတာပေါ့။ အတင့်ရဲလွန်းတဲ့ ငါးအချို့ကတော့ တံငါသည် ထိုင်နေတဲ့နေရာနားကို တန်းသွားပြီးတော့ ပါးစပ်ကြီးတွေ ဟပြီး စောင့်ဆိုင်းနေလေရဲ့။ သဘောကတော့... ကျုပ်ပါးစပ်ကြီးထဲကိုသာ တိုက်ရိုက် ပစ်ထည့်လိုက်ပါတော့... ပေါ့လေ။
ကိုယ်ကျင့်တရားမဲ့တဲ့ နအဖဆိုတဲ့ တံငါသည်ကတော့ ၂ဝ၁ဝ ကျရင် သူချထားတဲ့ ငါးမျှားတံတွေကို အားကုန်သုတ်ပြီး ဆွဲတင်တော့မယ်။ အဲဒီကျရင် ကြိုးမှာတန်းလန်း တဖျတ်ဖျတ်လူးလွန့်ပြီး ပါသွားတဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးတွေကို ရှုစားကြရပါဦးမယ်။
အင်းလေ…… သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ လို့ပဲ နှလုံးသွင်းရဦးမယ်ထင်ပါရဲ့။
(၂ဝ၁ဝ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော့်အမြင်ကို နောက်ပိုင်းမှာ ပို့စ်သပ်သပ် ရေးပါဦးမယ်။)
ပူးတွဲဖတ်ရှုရန်။.........။ သတိသာထားကြပေတော့ ကျွန်ပွဲစားတို့ လာချေပြီ
Posted by ကိုပေါ on Saturday, October 3, 2009
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, December 27, 2011
Labels: republished Comments: (9)
ဟောစိလို ကို တူးဖော်ခြင်း
(၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီက တင်ခဲ့တဲ့ပို့စ်ကလေးဟာ အခုအချိန်အထိ အံဝင်နေသေးတာတွေ့ရလို့ ပြန်လည်ဆန်းသစ်လိုက်ပါတယ်။)
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်တပ်တွေ မြန်မာပြည်ကို ဝင်အလာ....။
ရွာတရွာ ရောက်တော့ ဂျပန်တပ်တွေက ရွာထဲရှိသမျှ မိန်းမမှန်သမျှကို တယောက်မကျန် မုဒိန်းကျင့်သတဲ့။ အဲသည်လို အကျင့်ခံရတဲ့အထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ပေါက်ဖော်ကြီးတယောက်ရဲ့ ဇနီးလည်း ပါသတဲ့။
ဒီကိစ္စဖြစ်ပျက်ပြီး ခြောက်လ တနှစ်လောက် ကြာတဲ့အထိလည်း တရုတ်ကြီးက အဲဒီကိစ္စအပေါ် မကျေမချမ်းနိုင်သေးဘဲ တဖွဖွ ပြောနေသတဲ့။ ဒီတော့ မိန်းမကလည်း ကြာလာတော့ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ယောက်ျားကို ပြောတယ်။ “ဒီမယ်၊ ကျုပ်တယောက်တည်း ကွက်ပြီး မုဒိန်းအကျင့်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။ တရွာလုံးအကျင့်ခံရတာပဲ။ ရှင်က ဘာလို့ တမူထူးခြားပြီး မကျေမချမ်းဖြစ်နေတာလဲ” လို့ ပြောသတဲ့။
အဲသည်အခါ တရုတ်ကြီးက တရုတ်သံဝဲဝဲနဲ့... “အေး.... တရွာလုံး မုဒိန်းအကျင့်ခံရတာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေ မင်းကို မုဒိန်းကျင့်တုန်းက မင်းက အောက်ကနေ ဟောစိလို ဟောစိလို (ဟောဒီလို ဟောဒီလို) အလိုက်သင့် ကော့ ကော့ပေးတာကို မြင်ရလို့ ငါက မကျေမချမ်း ဖြစ်နေတာကွ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါသတဲ့။
အခုလည်း နအဖ အစိုးရက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မဟားဒယားကြီးကျင်းပလို့ သူတို့လိုချင်ရာကို (မုဒိန်းကျင့်သလို) အဓမ္မနည်းနဲ့ အရယူဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ဒီအနေအထားမှာ အချို့သောပြည်တွင်းအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများ၊ (၁၉၉၀ခုနှစ်က ရွေးချယ်ခံ) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတချို့နဲ့ ဂျာနယ်လစ်အမည်ခံ တတိယ အုပ်စုဝင် အချောင်နှိုက်သမားများဟာ ပြည်သူ့ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ရပ်ပြရမယ့်အစား နအဖကို အလိုတူ အလိုပါ “ဟောစိလို ဟောစိလို” အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားပေးနေတာ တွေ့မြင်နေရတဲ့အတွက် ပြည်သူတဦးအနေနဲ့ အင်မတန်မှ အော့နှလုံးနာမိပါတော့တယ်။
Posted by ကိုပေါ on Friday, December 9, 2011
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင် ဒေါ်ခင်ကြည်နေရာမှာ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးကို သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, December 6, 2011
Labels: general Comments: (52)